Faallo: Yurub, Yaxaaska ama Yunbo
(Sida eey badaha caalamku isugu bedeleen qabuuraha qaranka Somaliyed)
Tan iyo markii eey dagaalada sokeeyey ka qarxeen Somaliya, waxeey kumanaan dhalinayaro Somaliyeed ahi day-day ugu jireen dhabayaal eey u maraan tagista wadamada galbeedka Yurub, Mareykanka, Canada & Australia oo guud ahaan ah meelo lagu sheegay ineey ka nolol wanaagsan yihiin Somaliya iyo wadamada dariska la ah. Alleylehe, Sucuudi Carabiya ayaa iyana lagu sheegay in woxoogaa batrool ahi uu wali ku aasan yahay dhulkooda, suura-galna eey tahay in shaqooyin booyaasnimo, darawalnimo, fuundinimo IWM. laga helo. Si kasta oo xaalku yahayba, qabuurihii qaranka Somaliyeed wuxuu si ku meel gaar ah uga furan yahay bedweynta mideteranian-ka.
Isweydiin waxaa mudan maxaa ku khasbay dhalinyaradan ineey isbiimeeyaan? Dabcan waa naf-lacaari. Wexeey nolol moodeen qoxootinimada Yurub ee xeryaha lagu sugo lacag ceyr ah oo bishiiba mar loo soo tuuro dadka aan dalalka xasiloon laheyn. Dhamaan dhalinyaradan, oo aan qaarkood la sheekeystay ka hor intaaneey ka dhoofin Libya, waxaa heesta calanka u ah halheys caan ka ah dhalinyarada la il-daran cudurka Buufiska(damac waalan oo lagu doono in galbeedka uun lacaga dhigo), halheyskaas oo ah "Yurub, Yaxaaska ama Yunbo" Hadii la soo koobana laga wado: Ama Yurub baan tagi, ama yaxaas baa badda igu dhex cunaya, ama badda ayaan yunbanayaa (Tiinbanayaa) ! Iyagoo sidaas isku dhiiri galinaya ayeey soo jeexaan saxaraha u dhexeeya Sudan iyo Libya. Inta badan, waxaa lagu xirxiraa xuduuda labada dal, halkaas oo lala soo hadashiiyo reerohooda ku dhaqan yurub, halkaas oo xoogaa lacag ah looga qaato ($500.00) qiyaas ahaan. Marka e! ey xeradaas ka soo baxaan, wexeey afka aadiyaan caasimada Libya ee Tiripuli oo iyadu ka soo kabsaneysa cunaqabateyn caalami ah oo ku qaan-gaartay. Qeybta ugu dhibka badan inteeysan dhalinyaradani helin doonta dhimashada wexeey tahay dulaaliinta doonta oo aalaaba inteey lacag dhan $1,000.00 (kun doolar) ka hormarsadaan dhalinyaradan misana ku inkira, dabadeedna xabsiga u taxaaba. Hadii eey u marto, mar mar waxaa suura gal ah in Police-ku joojiyaan doonta, halkaasna eey u taxaabaan xabsiga dhamaan tahriibayaasha, sida uu iigu waramay nin eey taasi ku dhacday. Sida uu ii sheegay, ku dhawaad 700 qof oo Somali ah ayaa imminkadan ku jira xabsiyada silicsan ee wadanka Libya.
Iyadoo eey dhibkaas oo dhan eey marayaan dhalinyaradan Somaliyeed ayaa misana waxaa isugu darsoomay laba arrimood: (a) Ragii eey daraadood wadanka uga soo qexeen oo wali iyagoo shaxaad ah dhex meereysanaya wadanka Libya. (b) Walba hadii la xiro ama dhib kale loo geysto, siyaasiyiin ku sheegan shaxaad doonka ahi marnaba afkooda uma kala qaadayaan ineey ka hadlaan dhalinyaradan dhibaateysan. Iskaba daa ineey taas sameeyaan, waxaa la ii sheegay ineey isku dayaan ineey lacag ka qaataan qofka eey soo deynayaan oo eey dowlada Libya kala hadlayaan! Markaas, dhalintii soo qaxay ee tahriib doonka ahaa waxaa dhibkoodiiba usii dheer in mid magaca hogaamiyohooda ku qaraabanaya uu ka dalaalayo dhiigoodii. Kolka, waxaa isweydiin mudan: Tolow dalkaan yaa iska leh? Dadkuse yeey u dhasheen? Dhamaan waa su'aalo kasoo maaxaya maskaxda qofkii woxoogaa waqti yar uu fikir ah galiya.
Gunaanadkii, waalidiinta Somaliyeed waxaa la gudboon ineey ku quus-qaataan xasuuqa ku habsaday caruurtoodii. Siyaasiyiinta Somaliyeed (kuwooda Libya xiriirka la leh) waxaa la gudboon ineey dowlada Libya u bandhigaan dhibaatadan, isla markaana ka codsadaan ineey dhalinyaradan hadii eeysan wax kale u heyn ku soo celiyaan dalkooda. Dhalinyarada Somaliyeed-na waxaa la gudboon ineey qubuurtooda ka qotaan dhulkooda hooyo, inteey si arxan-darro ah ugu sabbeyn lahaayeen biyaha caalamiga ah. Isla markaana gar-waaqsadaan tagista Yurub ineey ka horeyso tagista meel aan in la tago u qalmin.